Obbo Ibsaa Guutamaa: Yeroo cehumsaa Afaan Oromootiin akka baratamuuf quuqamaan hojjenne – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Ibsaa Guutamaa: Yeroo cehumsaa Afaan Oromootiin akka baratamuuf quuqamaan hojjenne
BC: Obbo Leencoo Lataa akkamitti isin hiiksisuuf dhufan ture?
Obbo Ibsaa: Hanga ammaa kitaabota hanga afurii barresseera. Ammaan boodas dhimmoota yeroon mana hidhaa turee kan afaan Ingiliffaan barreesse gara Afaan Oromootti hiikaan jira. Mata dureewwan adda addaa irratti barreessufis yaadan qaba. kanuma kana jechaan itti fufa